बाँस बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी - कृषि पत्रिका
बाँस खरीद गर्न आफू सुनसरीको देवानगञ्ज, हरिनगरा र भुटहाको ग्रामीण क्षेत्रमा जाने गरेको मण्डलले जानकारी दिए। विगतको तुलनामा अहिले बाँस गाउँतिर नै महँङ्गो मूल्यमा खरीद गर्ने उनले जानकारी दिए । बाँस अहिले रु. २३० प्रतिवटा खरीद गर्नुपर्ने र रु. २८० देखि रु. ३०० मूल्यसम्ममा बिक्री गरिँदै आइएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा कालोपत्र बाटोको निर्माण नहुनाले गाडा चलाउन समस्या भएकाले दुःख लागेको उनको भनाई छ । बाँस खरीद गरेर ल्याइपछि सबै दिन एकैनाशको व्यापार नहुने भएकाले कहिलेकाहीँ त खरीद गरी ल्याइएको बाँस एउटा पनि बिक्री नभई सबै सुक्ने गर्दछन् । खरीद मूल्यभन्दा कममा घाटा खाएर बाँस धेरै सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने समस्या रहेको उनले जानकारी दिए । ग्राहकले माग गरेमा आफूले घरघरसम्म बाँस लगिदिनेसमेत गरेको उनले बताए ।
आफ्नो पाँच जनाको परिवारको पालनपोषण यही बाँसको कारोवारले गर्दै आइरहेको र यसको व्यापारबाट महिनामा राम्रो आम्दानी भएको हुँदा पेशाप्रति सन्तुष्ट लागेको मण्डलले जानकारी गराए । रासस